Sababaha iyo calaamadaha qoorgooyaha. – Noor Health Life
Sababaha iyo calaamadaha qoorgooyaha.
Maalinta qoorgooyaha aduunka ayaa aduunka oo dhan laga xusay 24-ka April. Maanta oo kale waxaa la soo agaasimay siminaaro iyo shirar kala duwan oo lagu baraarujinayo xumaddan si dadka loogu baraarujiyo calaamadaha, sababaha, daaweynta iyo ka hortagga xumadda. Waxaa lagu qiyaasaa in qandhadu ay saamayso in ka badan hal milyan oo qof adduunka oo dhan sannad kasta. Qoorgooye wuxuu ku dhici karaa dadka da’ kasta leh, hadday yar yihiin ama ha noqdeen kuwo weyn. Daawaynta wakhtiga ku haboon ayaa ah mid aad muhiim u ah,hadii ay qandhadu gaadho heer khatar ah,waxa ay dili kartaa bukaanka buka,sidaa awgeed taxadar ayaa loo baahan yahay.
Sababaha keena qoorgooyaha
Dabeecaddu waxa ay habaynta ugu wanagsan u samaysay maskaxda bini aadamka iyo cerebellum waxa ay ku kaydisay saddex xuub oo ka badbaadiyay khataro iyo cuduro kala duwan,xataa caabuq yar oo ku dhaca xuubabkan waxa uu keenaa cuduro badan. Xuubabkaan waxaa saameyn kara dhaawacyada madaxa, jeermiska dhiigga gala, caabuqa sanka iyo dhegaha, iyo qoorgooyaha.
Calaamadaha lagu garto qoorgooyaha
1. Qoor-gooyaha, bukaanku marka hore waxa ku dhaca qandho aad u sareysa.
2. Haddii ilmuhu qandhadan qabto, si joogto ah ayuu u ooyaa.
3. Ma jiraan wax kaa dhigaya inaad wax cunto ama cabto.
4. Marka ay qandhadu sii korodho, bukaan-socodka ay saamaysay waxa uu bilaabayaa gariir.
5. Baro cas ayaa jidhka ka soo baxa.
6. Caajisnimada indhaha ayaa meesha ka baxda, daboolka indhaha ayaa si tartiib ah u socda.
7. Calaamadaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah qoorta oo aan leexan, luquntu si fiican uma bogsato, bukaanna ma qaadi karo qoorta, sidee buu halis u noqon karaa qoorgooyaha mustaqbalka?
Geneva: Warbixin ay soo saartay hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa daaha ka qaaday in shantii qofba mid ka mid ah uu sanadaha soo socda la kulmi doono dhibaatooyin xagga maqalka ah oo ay sabab u tahay qoorgooyaha iyo sababo kale.
Sida ay baahiyeen warbaahinta caalamiga ah warbixin ay soo saartay hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa lagu sheegay in dad badan oo caalamka ku nool ay xilligan wajahayaan dhibaatooyin xagga maqalka ah.
Warbixin ay soo saartay Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO
Sida laga soo xigtay isaga, kororka qoorgooyaha iyo ka warqab la’aanta ku saabsan waxay noqon kartaa mid aad u daran sababtoo ah qoorgooyuhu wuxuu si toos ah ula xiriiraa maqalka.
Khubarada caafimaadku waxa ay sheegeen in qoorgooyuhu uu aad u saameeyo maskaxda iyo unugyada maqalka,taas oo keenta in farriinta maskaxda gaadho ay go’do.
Khubarada WHO ayaa sheegay in xaaladdan halista ah wax looga qaban karo oo keliya in la yareeyo buuqa iyo sawaxanka ka jira goobaha ay bulshadu ku badan tahay, lana bixiyo gargaar caafimaad oo waqtigeeda ku habboon.
Warbixintii ugu horreysay ee dhegeysi caalami ah oo ay soo saartay WHO ayaa lagu sheegay in “sodonka sano ee soo socda, tirada dadka dhegoolaha ah ay kordhin doonaan in ka badan 1.5%, taasoo la macno ah in shantii qofba mid ka mid ah uu yeelan doono dhibaatooyin maqal.”
Warbixintu waxay sheegtay in “kordhinta la filayo ee dhibaatooyinka maqalka ay sidoo kale sabab u tahay kororka tirada dadka, wasakhowga buuqa iyo isbeddellada dadweynaha.”
Warbixinta Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa sidoo kale soo xiganeysa sababaha keenaya maqal la’aanta ka dhalatay helitaan la’aanta daryeel caafimaad iyo la’aanta khubarada caafimaadka ee dalalka dhaqaalahoodu hooseeyo.
Warbixintu waxa ay sheegtay in 80% dadka ku nool dalalkan oo kale ay qabaan dhibaatooyin xagga maqalka ah, kuwaas oo intooda badan aan helin daryeel caafimaad, halka dalalka qaniga ah aanay helin daryeel caafimaad, sababo la xidhiidha korodhka dadka. Waxaad u soo diri kartaa Noor Health Life su’aalo iyo jawaabo dheeraad ah. noormedlife@gmail.com